भारतले क्वान्टम सिम्युलेटर क्युसिम कम्प्युटर बजारमा ल्यायो - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय भारतले क्वान्टम सिम्युलेटर क्युसिम कम्प्युटर बजारमा ल्यायो
भारतले क्वान्टम सिम्युलेटर क्युसिम कम्प्युटर बजारमा ल्यायो
नयाँ दिल्ली, । आउदो अगामी केही समयमै क्वान्टम कम्प्युटरको माध्यमबाट संसार र मानविय जीवनलाई बदल्न सक्छ ।
क्वान्टम कम्प्युटरको महत्व दिँदै यसको विकासका लागि अघिल्लो वर्ष भारत सरकारले ८ हजार करोड बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो वर्ष अगस्ट महिनाको अन्तिममा भारतले क्वान्टम सिम्युलेटर क्युसिम बजारमा ल्यायो जसबाट वैज्ञानिक र व्यवसायीलाई सजिलो भएको छ ।
भारत बाहेक अन्य देशले पनि भविष्यमा नयाँ दिशा दिने यो उपकरणमा लगानी गरिरहेका छन् । अमेरिकी सरकारले २०१८ मा नेश्नल क्वान्टम इनिसिएटिभ कानुन बनायो र यसको लागि १ अर्ब २० करोड डलरको व्यवस्था ग¥यो ।
चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले २०१६ मा १३ औं पञ्वर्षीय योजनामा क्वान्टम सञ्चारलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उद्योगहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
बेलायतले २०१३ मा यसको लागि राष्ट्रिय रणनीति बनायो । २०१६ मा क्यानडाले यो उपकरणमा ५ करोड क्यानेडियन डलर लगानीको घोषण ग¥यो । यो बाहेक जर्मनी, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, रुस, जापान र गुगल, अमेजन, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरू पनि यो उपकरणमा लगानी गरिरहेका छन् ।
निश्चित नभएको विज्ञान
क्वान्टम कम्प्युटरको चर्चा २० औं शताब्दीको सुरुवात देखि भएको थियो । यो त्यहि समय हो, जब अल्वर्ट आइन्ट्यान्टले संसारलाई ‘थेउरी अफ रिलेटिविटी’ को ज्ञान दिएका थिए ।
क्यानाडाको विल्फ्रेड लोरियल विश्वविद्यालयमा भौतिक शास्त्र र कम्प्युटर विज्ञानकी प्रोफेसर डाक्टर सोहिनी घोषले भौतिक विज्ञानको सिद्धान्त निश्चित नगरिएको बताइन् ।
‘यो अनिश्चित पदार्थको सबैभन्दा सानो कणको अणुको व्यवहारमा हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘क्वान्टम मेकानिक्स यो सानो अणुको व्यवहारको अध्यन हो, जुन भौतिक विज्ञानको एउटा परिधिमा रहेर असम्भव छ ।’
डा. घोषले क्वान्टम कम्प्युटरको परियोजनामा काम गर्दा आफूलाई आनन्द लागिरहेको बताउँदै यसको अवधारणाले आफूलाई क्रान्तिकारी बनाएको दाबी गरिन् । अहिले भइरहेको प्रक्रियाले भौतिक विज्ञान भन्दा फरक सिद्धान्तबाट काम गर्ने उहाँको धारणा छ ।
‘क्वान्टम संसारको अनिश्चितता को प्रकृति हो,’ उनी भन्छिन्, ‘जुन यस्ता प्रकारको मेसिन बनाउन चाहाने बुझ्न जरुरी छ ।’
किन विशेष क्वान्टम कम्प्युटर ?
एक प्रविधि विश्वविद्यालयमा पढाइरहनुभएका प्रोफेसर स्टीफनी वेनर साधारण कम्प्युटरभन्दा क्वान्टम कम्प्युटरले तेज काम गर्ने बताउँछन् ।
सधारण कम्प्युटरले एक वा शून्यमा काम गर्छ भने क्वान्टमले दुवै माध्यमबाट काम गर्ने उनको भनाइ छ । आफू कुनै दोधारमा परेको अवस्थामा साधारण कम्प्युटरले भन्दा यसले धेरै छिटो काम गर्ने उनको दाबी छ । ‘क्वान्टम कम्प्युटरले साधारण कम्प्युटरले गर्ने सबै काम गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘क्वान्टम कम्प्युटरले केही घण्टामा गर्ने काम साधारण कम्प्युटरलाई एक जुनी भन्दा पनि धेरै समय लाग्छ ।’
क्वान्टम कम्प्युटरले कम्प्युटरको इतिहासमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने उनको विश्वास छ ।
Previous articleएमसीसीका कारण हल्लिदै सत्ता गठबन्धन , बाबुराम पनि मैदानमा
Next articleपाकिस्तानको अर्थतन्त्र धारासायी